क्लिकले गुगल ग्याजेट शुरू गर्‍यो Martech Zone
शुक्रवार, अक्टुबर 5, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यदि तपाईं मेरो ब्ल्गलाई केहि समयको लागि पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाँहा हुन्छ कि मँ क्लिकि वेब एनालिटिक्सको ठूलो प्रशंसक। यो केवल एक शानदार, हल्का तौल, नो-बकवास वेब एनालिटिक्स प्रोग्राम हो जुन ब्लगि forको लागि उत्तम हो। मलाई यो यति मनपर्‍यो कि मैले यसको लागि WordPress प्लगइन पनि लेखें!
अब स्कट फाल्किंघम द्वारा iGoogle क्लिकी ड्यासबोर्ड आयो जिज्ञासु अवधारणा:
को सबै कार्यक्षमता लिनुहोस् Clicky र यसलाई राम्रो ग्याजेटमा राख्नुहोस्! वाह! तपाईंले कि त iGoogle पृष्ठमा गुगल ग्याजेट प्रयोग गर्नुपर्दैन। गुगल ग्याजेटहरू सफा सानो स्क्रिप्ट ट्यागको साथ कहिँ पनि राख्न सकिन्छ। मलाई ग्याजेट यति मनपर्‍यो कि मैले WordPress WordPress प्लगइन अपडेट गरें र यसलाई शनमा पठाउँछु! आशा छ, उसले नयाँ प्रशासन प्लगइन ग्याजेट इम्बेडेडको साथ रिलीज गर्नेछ!
ग्याजेट प्राप्त गर्नका लागि साइन अप गर्न जानुहोस् Clicky। तपाईं गुगलमा ग्याजेट र गुडिज पृष्ठमा WordPress WordPress प्लगइन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
टैग: डेभिड साइटमैन मालास्मार्ट छिटो सस्तोमाथि उठ्नुहोस्ट्विटर मार्केटिंग
PHP र MySQL: ट्याब डेलिमिटेड फाईलमा क्वेरी निर्यात गर्नुहोस्
अक्टूबर २०, २०१ at २:5० अपराह्न
मलाई क्लिकी मन पर्छ, मैले भर्खरै यसलाई मेरो ब्लगमा थपेको छु र मलाई वास्तवमै प्रयोगकर्ता इन्टरफेस र मेट्रिक्स मनपर्दछ जुन यसले प्रयोग गर्दछ। मलाई यो गुगल एनालिटिक्स भन्दा धेरै मनपर्छ, मलाई लाग्छ कि यसले गुगल एनालिटिक्सले गर्ने तरिकामा जानकारी प्रस्तुत गर्ने तरिकाले गर्दा।
मसँग अझै पनि मेरो साइटमा दुबै छ यदि मैले मेरो मन परिवर्तन गरे वा गुगलले मेट्रिक्स सुधार गर्छ र म तुलनात्मक डेटा चाहन्छु।
अक्टोबर 6, 2007 बिहान 6:12 बजे
मलाई लाग्छ कि मलाई सबैभन्दा राम्रो मनपर्छ, डस्टिन! म पनि गुगल एनालिटिक्स वरिपरि राख्छु - मलाई ग्राफिङ क्षमताहरू मनपर्छ - विशेष गरी विशिष्ट समय अवधिहरूमा तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने क्षमता। फ्लैश-आधारित ग्राफिङ एकदम सहज छ।
क्लिकीले GA लाई पानीबाट बाहिर निकाल्ने चीजहरू मध्ये एउटा डाउनलोडहरू ट्र्याक गर्ने क्षमता हो। मैले प्रायः मेरो साइटमा उदाहरणहरू राखेकोले, यो मेरो लागि हेर्नको लागि उत्कृष्ट सुविधा हो!
म क्लिकीको ठूलो फ्यान हुँ। मलाई यो अझ मनपर्छ यदि कुनै तरिकाले लोकप्रिय पोष्टहरू साइटमा प्रदर्शन गर्न क्लिकीबाट उत्पन्न गर्न सकिन्छ - इनहेरिटिङ् सीएसएस।
म कोडर होइन, तर कसैले यो *संकेत संकेत* गर्न सक्छ भने मलाई मनपर्छ